News List - राजनीति
१४ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले एक महिनाभित्र भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ट राहत दिन सरकारसँग माग गरेको छ । नभए आन्दोलनमा उत्रने उसको चेतावनी छ । कांग्रेसका २२ सांसदले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै भूकम्प ...
१४ वैशाख, वासिङटन डिसी । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले मधेसको माग कांग्रेसले सम्बोधन गर्नसक्ने बताएका छन् । अमेरिका भ्रमणकाक्रममा आइतबार भर्जिनियामा जनसम्पर्क समिति भर्जिनियाद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले ...
१२ वैशाख, सिराहा । फोरम लोकतान्त्रिकका नेता शत्रुधनकुमार महतो संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा प्रवेश गरेका छन् । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकका राजनीतिक समितिका सदस्य एवं पूर्व राज्यमन्त्री महतोको नेतृत्वमा नेता कार्यकर्ता फोरम नेपाल प्रवेश ...
११ वैशाख, बाजुरा । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री भीम रावलले नेकपा एमाले अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा रहेको बताएका छन् । नेकपा एमाले बडिमालिका नगरपालिका बाजुराको प्रथम नगर अधिवेशन उद्घाटन रावललले अखण्ड सुदूरपश्चिमका लागि तराईका दुई ...
१० बैशाख, काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले संविधान पुनर्लेखनको मागसहित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। संघीय गठबन्धनले शक्रबार काठमाडाैंमा पत्रकार सम्मेलन गरी वैशाख १५ गते ज्ञापनपत्र बुझाउने, १७ गते जिल्लाका ...
१० वैशाख, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्पूर्ण क्रान्तिकारी, देशभक्त एवम् परिवर्तनकारी शक्तिलाई एकताका लागि आग्रह गरेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस तथा तत्कालीन सोभियत सङ्घका नेता भिआई लेनिनको १४६औँ ...
९ वैशाख, काठमाडौं । चार माओवादी र नयाँ शक्ति नेपाल द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुमा एक ठाउँमा आएका छन् । प्रचण्ड, वैद्य, मात्रिका यादव, मणि थापा नेतृत्वको माओवादी र नयाँ शक्ति नेपालले बिहीबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै न्यायालयले शान्ति सम्झौता उल्लंघन गरेको ...
९ बैशाख, गुल्मी । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले वर्तमान सरकारले कालोबजारी र भष्ट्राचारीलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल बिद्यार्थी संघको ४६ औं स्थापना दिवसको अबसरमा नेपाल बिद्यार्थी संघ गुल्मीद्वारा तम्घासमा आयोजित संबिधान ...
८ वैशाख, काठमाडौं । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिका एक केन्द्रीय परिषद सदस्य उदय राई विप्लव माओवादीमा प्रवेश गरेका छन् । मोरङको बेलबारी १, नक्सलबारी घर भएका राईले मंगलबार नयाँ शक्ति छाडेको घोषणा गरेका हुन् । चावहिलस्थित पशुपति क्याम्पसमा आयोजना ...
७ वैशाख, काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले भोली बुधबार आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ। गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताको मंगलबार संघीय समाजवादी फोरम नेपालको कार्यालयमा बसेको बैठकले बुधबार आन्दोलनका कार्यक्रम ...
७ बैशाख, सिन्धुपाल्चोक । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले जनताको दैनिकी सहज बनाउन सरकार असफल भएको आरोप लगाएका छन् । सिन्धुपाल्चोकमा नेपाल तरुण दललको जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्दै पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले सरकार सस्तो लोकप्रीयता ...
राप्रपा नेपालले मन्त्री विष्टलाई फिर्ता बोलायो
६ वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले स्थाीय विकास सहायकमन्त्री विराज विष्टलाई फिर्ता बोलाइएको छ । राप्रपा नेपालका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल मार्फत मन्त्री विष्टलाई फिर्ता बोलाउन प्रधानमन्त्री समक्ष पत्राचार ...
रामचन्द्र पौडेल किन पुगे प्रचण्डको दैलोमा !
५ वैशाख, काठमाडौ । सभापति र संसदीय दलको नेतामा पराजित भएका नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल आज बिहान एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निबासमा पुगेका छन् । तीन महिनापछि पौडेल प्रचण्डलाई भेट्न उनकै निवास लाजिम्पाट पुगेका हुन् । भेटको क्रममा ...
पत्रकारमाथि खनिदै ओलीले भने–एमालेको चिन्ता लिनु पर्दैन
४ वैशाख, काठमाडौ । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीका बैठकमा हुँदै नभएको समाचार प्रकाशित भएको भन्दै पत्रकारमाथि प्रश्न गर्दै एमालेको चिन्ता नलिन आग्रह गरेका छन् । उनले पार्टीको बैठक स्वस्थानी बाचन गरेजस्तो एउटाले भन्ने अरुले सुन्नजस्तो नभएको ...
ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित, मधेसी मोर्चालाई वार्तामा अाउन अाह्वान
३ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिएको छ। शुक्रवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको वैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित गरेको छ। यस्तै वैठकले राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि ...
मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको स्वरूप फेर्ने, अब राष्ट्रिय आन्दोलन गर्ने
२ बैशाख, काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले यसअघि मधेसमा केन्द्रीत आन्दोलनलाई अब राष्ट्रिय स्वरुप दिने भएको छ। मोर्चाले आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारु, दलित लगायतका समुदाय समेतका माग अगाडि सारेर राष्ट्रिय स्वरुपको आन्दोलन गर्ने भएको हो। ...
ओलीलाई माधव नेपालले सोधे–गुटबन्दी गरेर पार्टी चल्छ !
२ वैशाख, काठमाडौ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई नेता माधव कुमार नेपालले गुटबन्दी गरेर पार्टी चल्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् । जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा दस समुहका समुह नेता र चार आयोगका प्रमुखले धारणा राख्ने क्रम सम्पन्न भएपछि नेता नेपालले ...
द्वन्द्वपीडित समस्यामा सरकार उदासी भएको भट्टराईको अारोप
१ वैशाख, ललितपुर । नयाँ शक्तिका संयोजक एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले बेपत्ता तथा द्वन्द्वपीडितको समस्याप्रति राजनीतिक दलहरू उदासीन रहेको आरोप लगाएका छन्। ‘झन् बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने माओवादी धाराहरू विभाजनका कारण झन् बढी उदासीन देखिएका ...
सरकार सबै क्षेत्रमा असफलः डा बाबुराम भट्टराई
३० चैत, जनकपुरधाम । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले वर्तमान सरकार सबै क्षेत्रमा असफल भएकाले सत्तामा रहिरहने नैतिक आधार नभएको धारणा राखेका छन् । जनकपुरघाममा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारको गतिविधि र भाषा ...
ओलीलाई प्रश्न–कारवाही गर्ने निर्णय गरेर सम्मान गर्ने के पारा हो !
२९ चैत्र, काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केन्द्रीय समितिमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि दस समुहका टोली नेताहरुले धारणा राखिरहेका छन् । १ सय ८४ जना केन्द्रीय सदस्यलाई दस समुहमा विभाजित गरेर आइतवार छलफल सकिएपछि आजबाट धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको छ । ...
Results 397 - You are at page 1